Deg deg: gaalkii argagixiska ahaa ee xasuuqey muslimiinta oo la ogaadey inuu taageero Trump - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Deg deg: gaalkii argagixiska ahaa ee xasuuqey muslimiinta oo la ogaadey inuu taageero Trump
Argagixis Brenton oo ka soo jeeda Ustaraaliya aabihiina yahay gobolka Iskotland ee Ingiriiska ayaa la ogaadey inuu taageero weyn u ahaa xagjir Trump oo la yaqaan inay ka buuxdo Muslim nacayb weyn. Argagixiskaa ayaa qorey in Trump shidey tooshkii saraynta cadaanka.
” Gaalka weyn ee argagixis Brenton ayaa buug uu qorey oo ka koobnaa 74 bog uu ku qorey in Trump uu yahay nin soo celinaya sarayntii cadaanka waa sida uu u qorey, wuxuuse diidey siyaasada Trump taas oo ah laba is diidan.
Argagixiskan weyn oo hadda la soo faqayo wuxuu samayn jirey ayaa helaya cadaalad xumada gaalada ee ah in dilaa sidiisa oo kale ah lagu hayo jeel oo lagu quudiyo cashuurtii laga qaaday dadkii uu diley.
Xagjir Trump ayaa diidey inuu fulahaa Muslimiinta xasuuqdey ku sheego in uu fuliyay fal Xasuuq ee aanu ahayn mid argagixisnimo oo uu rabo inuu kalmadaa u daayo kooxaha gaalaynta sida Daacish iyo Shabaab.
Gaalkaas argagixiska ah ayaa sheegay inuu Ustaraaliya u yimi kaliya inuu fuliyo falkii xasuuq ee argagixisnimada ahaa.
Wararkii u dambeeyay xasuuqa ayaa masuuliyiinta Niyusiland sheegeen in ilaa 11 qof ku jiraan qaybta xaalada degdega oo ay ku jiraan ilmo 4 2 jira iyo wiil jira 14 jir.